हाकिम–कर्मचारी कार्यगत सम्बन्ध | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी हाकिम–कर्मचारी कार्यगत सम्बन्ध
on: १६ माघ २०७४, मंगलवार ०७:४१ रोजगारी
हाकिम–कर्मचारी कार्यगत सम्बन्ध
तपाईं कुनै कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ ? यस क्रममा गर्नुपर्ने भनेर तोकिएको काम त हामी सबैले गरिहाल्छौं । कसैकसैले भनेभन्दा कम पनि गरेका होलान्, अनि कसैले तोकेभन्दा बढी काम पनि गर्लान् । आफ्नो गर्नुपर्ने, गर्न छुटेको वा नभ्याएका कामहरूमात्र थाहा पाएर हुँदैन । हाकिम, सहकर्मी र जुनियर साथीसँग कसरी व्यवहार गर्ने ? कार्यालयमा आफ्नो व्यवहार कस्तो छ ? कार्यालयको वातावरण कस्तो छ ? आदि कुरा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ । सहकर्मीलाई गर्ने जस्तै व्यवहार हाकिमलाई गर्न मिल्दैन । सहकर्मीसँग जे कुरा गर्छौं त्यही कुरा हाकिमसँग गर्न पनि मिल्दैन । हाकिमसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा केही आधारभूत जानकारी यहाँ दिइएको छ ।
कम्पनीको लाभ :
हामी केही समस्या भयो भने मात्र हाकिमकहाँ जान्छौं । यसबाहेक अन्य कुरा हामी हत्तपत्त हाकिमसँग गर्दैनौं । तर, कहिलेकाहिँ हामीले कम्पनीलाई फाइदा हुने विषयबारे पनि छलफल गर्नुपर्दछ । यति मात्रै नभई कुनै कुराले कम्पनीलाई नोक्सान भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्दछ ।
हामी आफ्नो योजनाबारे हाकिमसँग कुरै गर्दैनौं । कुनै योजना बनाएपछि त्यो पूरा गर्नैपर्छ भन्ने दबाब हुन्छ । बोलेको कुरा पु¥याइनँ भने भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने डरले पनि हामी भावी योजनाबारे हत्तपत्त मुख खोल्दैनौं । तर, आगामी महीना वा वर्ष कार्यालयमा केके गर्ने योजना छ भनेर हाकिमसँग बेलाबेलामा कुरा गर्नुपर्दछ । यस्तो भएमा तपाईंप्रति हाकिमको विश्वास बढ्छ । योजना पूरा गर्न अलि बढी सक्रियता देखाउनुपर्ने भएकाले कार्यसम्पादनमा पनि सकारात्मक असर पर्दछ ।
कार्यक्षेत्रका व्यावहारिक समस्या :
दैनिक काम गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न व्यावहारिक समस्या भोगिरहेका हुन्छौं । कहिलेकाँही समूहमै मतभेद उत्पन्न हुन सक्छ । कहिलेकाहिँ हाकिमसँग यस्ता विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्दछ । यसले व्यवस्थापन तहलाई पनि समस्या समाधान गर्न प्रेरित गर्दछ ।
नियमित सूचना :
हरेक दिन कार्यालय आएपछि हामी काममै व्यस्त हुन्छौं । तर, हामीले गरेको सबै काम पूरा हुन्छन् नै भन्ने हुँदैन । कुनै कामका लागि धेरै समय लाग्छ अनि कुनै काम केही घण्टामै पनि सकिन्छ । तपाईंले काम गरिरहँदा पनि कहिलेकाहिँ काम सम्पन्न हुन अझै केही समय लाग्न सक्छ । यस्तोमा हाकिमलाई भने यो मान्छेले त कामै गरेको छैन वा काममा अल्छि पो गरिरहेको छ कि भन्ने भान पर्न जान्छ । आफूले गरिरहेका हरेक कामको हाकिमलाई सूचना दिनुहोस् । कुन काम कहाँसम्म पुग्यो ? कुन काममा समस्या उत्पन्न भएको छ भनेर हरेक कामको फाइल बनाएर राख्नुहोस् । यसो गर्दा काम सम्पन्न नै नभए पनि प्रगति त भइरहेको छ भनेर छाप पर्दछ र विश्वास पनि जित्न सकिन्छ ।
प्रस्तुति : रमा सुवेदी (एजेन्सीको सहयोगमा)